Забур 121 CARS - Nnwom 121 ASCB
1Mema mʼani so kyerɛ mmepɔ no,
ɛhe na me mmoa firi bɛba?
2Me mmoa firi Awurade,
3Ɔremma wo nan nwatiri,
deɛ ɔhwɛ wo no, ɔrentɔ nko.
4Ampa ara deɛ ɔhwɛ Israel no
rentɔ nko na ɔrenna.
5Awurade hwɛ wo so;
Awurade ne wo nwunu wɔ wo nsa nifa so;
6Owia renhye wo wɔ awiaberɛ mu,
na ɔsrane nso renha wo anadwo.
7Awurade bɛbɔ wo ho ban afiri ɔhaw nyinaa ho,
ɔbɛhwɛ wo nkwa so;
8Awurade bɛhwɛ wʼadifire ne wo efieba so,
ASCB : Nnwom 121